Fanapoizinana ara-tsakafo Tsy hilefitra ny ray aman-drenin’ireo mpianatra miisa 22
Rehefa vitan’ny mpitsabo teo Ambatomiraharavy ny fizaham-pasalamana sy ny fitiliana dia voalaza fa ny fihinanana sakafo
miaty fanapoizinana teo amin’ilay gargoty teo amin’ny faritry ny sekoly no nahatonga ny loza. Vokatry ny fanadihadian’ny mpitsabo hatrany no nahalalana fa samy nividy karazan-tsakafo teo amin’io tsena kelin-tsakafo io ireo mpianatra 22. Milaza ny tsy hilefitra ireo ray aman-dreny sasany manoloana ny fanapoizinana ara-tsakafo nahazo ireo mpianatry ny lisea eny an-toerana. Ny alakamisy teo tamin’ny 12 ora sy sasany atoandro no nitranga ny loza, tao anatin’ny lisea Ambatomirahavavy, faritra Itasy.
Notaomina naiditra hopitaly ireo zatovo ireo. Tao ny nandoa, nisy koa ny narary kibo, maro no nivalana ary samy nalemy avy hatrany avokoa izy rehetra ireo. Vao nisy nihoaka nandoa dia mailo tanteraka ireo manodidina sy ny mpanabe, fa tsy misy valaka tamin’ny nahazo ireo mpianatr’Andravoahangy mantsy no nahazo azy ireo. Tsy nisy moa ny aina nafoy fa avotra soamantsara daholo ireo mpianatra. Mpampianatra iray eo amin’ny sekoly no tompon’io gargôty io. Maro ny sakafo masaka tsy ara-dalàna eto amin’ny Nosy fa isaky ny misy tranga vao miseho mandray andraikitra ireo mpitsirika ara-pahasalamana.